Farmaajo Oo lagu wado In uu galo Safar shacabka Ku nici doonaan#aqriso xagee buu aadayaa | Xaqiiqonews
Farmaajo Oo lagu wado In uu galo Safar shacabka Ku nici doonaan#aqriso xagee buu aadayaa
Kadib fashilkii ku yimid shirkii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo ee lagu dhax dhaxaadinayay Farmaajo iyo Itoobiya ayaa xallinta khilaafkaas loo weeciyay dhanka magaalada Addis Ababa.
Wakaaladda wararka Turkiga qeybteeda Afka Carabiga ku hadasha ayaa baahisay warbixin ku saabsan socdaal uu dhowaan Farmaajo ku tagi doono magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
“Madaxweynaha Soomaaliya ayaa arbacada soo socota markii ugu horraysay booqasho ku tagaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya” sidaas waxaa ciwaan ka dhigatay wakaaladda Al-naadool.
Mas’uul katirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Itoobiya ayaa wakaaladda u sheegay in socdaalka Farmaajo uu dhici doono maalmaha Arbacada iyo Jimcaha islamarkaana kulanka diiradda lagu saari doono arrimaha wanaajinta cilaaqaadka labada xukuumadooda iyo la dagaallanka waxa loogu yeero ‘Argagaxisada’.
Socdaalka Farmaajo ayaa yimid kadib amar uga yimid R/wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn oo lafilayo in uu heshiisyo dhowr ah ka saxiixo.
Ilo wareedyo Hoose ayaa waxay sheegayaan in socdaalka Farmaajo lagusoo gunaanadayo shaki Itoobiya ka qabtay hoggaanka cusub ee DF-ka oo ladoortay bishii Feberaayo 2017.
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka ayaa horay saraakiisha ciidankaItoobiya uga codsaday in ciidamadoodu ay sii joogaan dalka Soomaaliya.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa bilihii lasoo dhaafay isaga baxayay degmooyin iyo deegaano dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya waxaana ugu dambeyay ka bixitaankii degmada Ceelbuur.
Booqashada Farmaajo ee magaalada Addis Ababa ayaa meesha ka saaraysa ballanqaadkii uu sameeyay xilligii uu xilka madaxtinimo u ordayay ee aheyd in uusan booqan doonin Addis Ababa, ujeedka uu arrinkaasi ka lahaa ayaa aheyd in uu ku kasbado taageerada shacabka oo xilligaasi dhibsaday mudane Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyihii hore ee DF-ka.
Falanqeeyeel Soomaaliyeed ayaa aaminsan in dowladda Itoobiya ay majaraha uheyso dhammaan Dowlad goboleedyada dalka kajira .